Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba Zokuhamba e-USA » Ukulungelelanisa ukuthengisa ukhenketho kunye neemfuno zokhuseleko
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zoMsebenzi woHamba • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Amathuba otyalo-mali • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Safety • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba eziShukumayo • Iindaba ze-USA
UPeter Tarlow wabelana ngeengcinga zakhe malunga nokulinganisa ukuthengisa kwezokhenketho kunye neemfuno zokhuseleko
Kwihlobo ephelileyo, ishishini lezokhenketho alifumananga kuphela kutshintsho olukhulu lweparadigm, kodwa lizifumene liphakathi kweyona ngxaki imbi kwimbali yayo.
Nokuba sele kudlule ishumi leminyaka elidlulileyo lenkulungwane yamashumi amabini, bekungaqhelekanga ukuva amagosa ezokhenketho evakalisa iinkxalabo zawo kuba esoyika ukuba okuninzi, okanye okubonakalayo, ukhuseleko kwezokhenketho kungakhokelela kukoyikwa kwabatyeleli kunye nokwehliswa kwenzuzo.
Ke i-COVID-19 yaba yinto yokwenene, kwaye lonke uhlobo lokhuseleko lwabaluleka.
Inkulungwane yamashumi amabini ananye yokuqala yonyaka weshumi leminyaka yesithathu itshintshe zonke iingcinga zangaphambili.
Kwihlabathi elinobungozi ngakumbi, iindwendwe kunye nabakhenkethi bafuna ukwazi ukuba zeziphi iindlela zokukhusela ezenziwayo, ukuba ukhuseleko lwabo luthathelwa ingqalelo njani, kunye nobani abanokuthi babhenele kubani kwimeko kaxakeka.
Abasemagunyeni kwezokhenketho bale mihla bayayiqonda into yokuba kukho utshintsho olusisiseko oluqhubayo kushishino lokuhamba kwaye iingcinga zakudala azisayi kuphinda zibekho. Ngenxa yokuvalwa korhulumente ngurhulumente kunye nesidingo sokusebenza ekhaya, ukuhlala nokucinga kwishishini kwiminyaka embalwa edlulileyo kuyingozi kakhulu kwaye kungenza umahluko phakathi kokusinda kweshishini nokusilela.
La maziko kunye nemibutho kushishino lokhenketho nokhenketho eyamkela kwaye igxininise ukhuseleko iya kuba nethuba elihle lokusinda kwaye oku kubandakanya iinxalenye zeshishini, ezinje ngeepaki zesizwe, ezinxibelelene norhulumente. Iindawo ezinikezela ukhuseleko olufanelekileyo oluxutywe nenkonzo elungileyo yabathengi zinethuba elingcono lokomelela kunye nokusinda. Ngelixa kungekho mntu unokuvelisa ukhuseleko olupheleleyo, kwaye asazi nokuba yeyiphi imiceli mngeni ezayo, obu buchule bufunyenwe apha ngezantsi bunokukunceda ukuba ube kukujoliswa okuncinci kwaye ubuye ukhawuleze. Banokukunceda usebenzise ukhuseleko, kunye nempilo njengezixhobo zentengiso. Isitshixo kukuqala ngempumelelo enokufikelelwa kwaye usebenzise ezo mpumelelo ukwakha umfutho.
• Ukhuseleko kunye nokukhuseleka, kunye nempilo yoluntu inokuba neentsingiselo ezahlukeneyo kubaphengululi nakurhulumente wase-US, kodwa kwihlabathi lokuhamba bayinto enye. KwithubaCovid Ixesha kubalulekile ukuba siqonde ukuba amanzi anetyhefu, ukucoceka kococeko, kunye nemipu ineziphumo ezifanayo: ukutshatyalaliswa kweshishini lakho lokhenketho. Kubalulekile ukuba ishishini lokuhamba nelokhenketho liqonde unxibelelwano phakathi kolawulo lomngcipheko kunye nokhuseleko. Ngamacala amabini engqekembe enye. Iindawo ezifumana ukupapashwa okungathandekiyo, ngokufanelekileyo okanye ngokungafanelekanga, kuya kufuneka zisebenze ukutshintsha umbono ukuba unethemba lokuphila.
• Ubuhle kunye nokhuseleko zihamba kunye. Xa okusingqongileyo kukhuselekile, undwendwe luziva lukhuselekile. Iingcali zokhuseleko kwezokhenketho ziyazi ukuba ukhuseleko olufanelekileyo luqala ngo imbono yokhuseleko. Ngokucoca izitalato zakho, ngokutyala iintyatyambo, imithi kunye neegadi ezincinane ezijikeleze isixeko sakho, awupheleli nje ekunciphiseni amathuba okuba ulwaphulo-mthetho luyakwenzeka kodwa ukonyusa nomnqweno wabatyeleli wokuchitha ixesha kwindawo ohlala kuyo. Qinisekisa ukuba xa ubeka indawo kwindawo yakho ukuba uyenze ngokwemigaqo ye-CPTED (uthintelo lolwaphulo-mthetho ngokuyilwa kwendalo).
• Balumkele abo ubakhethe ukumema kwindawo ohlala kuyo ukuba banike iingcebiso. Iingcali zokhuselo lokhenketho kufuneka zibazi bobabini ukhenketho nokhuseleko. Zininzi iiyunivesithi ezibonelela ngezifundo kwezokhenketho kodwa zimbalwa eziqondayo ubudlelwane phakathi kokuqiniseka kokhenketho nokhenketho. Mema abantu abanokunceda uluntu ukuba lungasombululi nje ingxaki kodwa lukhuthaze umbono. Ukhuseleko lwezokhenketho lunokuba sisixhobo sokuthengisa kuphela ukuba luyinxalenye yombono opheleleyo wabahlali. Oko kuthetha ukuba umbono kufuneka wamkelwe ziindawo ezinomtsalane zalapha, abezopolitiko, amasebe amapolisa, abaphenduli bokuqala, abaphathi beehotele, abanini beevenkile kunye nabasemagunyeni kwezokhenketho.
• Ungaze wenze iimvakalelo zobuxoki zokhuseleko, ukhuseleko xa kuziwa kwimpilo yeendwendwe. Ungaze uthembise ngento ongenakukufeza. Iintlekele zentengiso zenzeka xa inyani ingangqinelani nokulindelweyo. Qeqesha kwaye ulungiselele uluntu lwakho ukuba lukhuseleke kwaye lukhuseleke. Ukhuseleko olufanelekileyo ayingombandela weemaski zerhasi, kodwa ilogic elula. Jonga ukuba uqiniseke ukuba imiqondiso yakho ichanekile, uphonononge iipateni zendlela, kunye nokubonelela ngolwazi lwakhenketho oluhlaziyiweyo kunye neenombolo ezingxamisekileyo.
• Ukuphuhlisa iinzame zokusebenzisana namapolisa asekuhlaleni kunye namasebe omlilo, ababoneleli ngoncedo lokuqala, abasebenzi bezonyango kunye nezibhedlele. Qinisekisa ukuba abaphenduli bakho bokuqala, abasesidlangalaleni kunye nabangenzi nzuzo bayazi ukuba lubaluleke kangakanani ukhuseleko lokhenketho kukhenketho. Umzekelo, uninzi lwamapolisa aluzange luqeqeshwe kukhuseleko olufanelekileyo lwezokhenketho. Kubalulekile ukuba umntu asebenze namapolisa asekuhlaleni, ukhuseleko lwabucala, iiyunithi zeenqwelo zezigulana, kunye neeyunithi zoncedo lokuqala ezinokuthi "ziguqule" phakathi kwemicimbi yokhenketho kunye nezokhuseleko. Uninzi lwamagosa okhenketho aluqondi ukuba amapolisa kunye namasebe ezomlilo alandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lwe-Weberian. Ukuba ulawulo oluphezulu lwesebe lakho lamapolisa aliwuxhasi umgaqo-nkqubo wezokhuseleko kwezokhenketho kunye noqeqesho lwamagosa, mancinci amathuba okubambisana kwamapolisa. Nceda inkosi yakho iqonde ukuba ukhuseleko lokhenketho lushishini olulungileyo kungekuphela eluntwini kodwa nakwisebe lakhe. Umzekelo, uninzi lwamasebe asebupoliseni asakholelwa ukuba umsebenzi wawo kukufumana imali kuluntu lwabo ngokunika amatikiti endlela. Ngaba urhulumente wesixeko sakho makachaze isebe lakho lamapolisa ukuba le migaqo-nkqubo ayiphelelwanga kuphela kodwa ayisebenzi.
• Nikeza iisemina kubakhenkethi bakho kwezokhuseleko nakwezokhuseleko. Amasebe ophendulayo okuqala angakulungela ngakumbi ukunceda kukhuseleko lokhenketho ukuba nawo ayazibona izibonelelo. Babonise indlela inzuzo evela kukhenketho enokunceda ngayo ekuthengeni izixhobo ezitsha, ukuxhasa ngemali indawo entsha okanye ukunceda uhlahlo-lwabiwo mali.
• Khuthaza iingcali zokhuselo lokhenketho kunye namaqabane ezokhuseleko ukuba bazimase abantu neenkomfa zokhenketho zikarhulumente nezengingqi. Eyona nkomfa indala kunye neyona idumileyo yezokhuseleko kwezokhenketho ibanjwa minyaka le eLas Vegas. Okwangoku uninzi lwezi ngqungquthela zomntu lubuyela nje ebomini emva kokungabikho konyaka ngenxa yobhubhane. Yonke i-CVB ephambili kufuneka ibe nommeli kwinkomfa yezokhenketho kunye nelungu elinye le-arhente yokunyanzeliswa komthetho.
• Yazi into engakhuselekanga kwindawo ohlala kuyo kwaye usebenze noorhulumente bengingqi ukuphucula ezi nkxalabo kwezokhuseleko. Ikhuseleke kangakanani isikhululo seenqwelomoya sakho? Ngaba kuphandwe ngemvelaphi yabasebenzi behotele kunye neeresityu? Kukangaphi sijonga imigaqo ehlaziyiweyo yezempilo? Kukangaphi apho abaqhubi beeteksi behlawulisa okanye bengazicimi izithuthi zabo? Ngaba iinkampani zabakhenkethi zibonelela abathengi bazo ngezinto abazithembisileyo? Kukangaphi kubanjwa iinombolo zamakhadi etyala njengenxalenye yobuqhetseba bobusela? Zeziphi iingxaki zokhuseleko lwe-cyber ezikhoyo okanye ezinokubakho?
• Yazi ukuba ngubani ofunda eyunivesithi yasekuhlaleni, ngakumbi kwizifundo zobunjineli kwaye ngubani osebenzisa ikhondo lakhe lokufunda njengemvelaphi yokuhlola. Abafundi baseyunivesithi basebenza ngokwentlalo ngokungathi ngabakhenkethi bexesha elide. Iiyunivesithi ezininzi zibamba abafundi bamanye amazwe, ababazi kancinci kakhulu. Ngaba abafundi baseyunivesithi bayinto elungileyo okanye embi kuluntu lwakho? Ngaba abafundi bamanye amazwe bakhona kuphela ngenxa yokufunda okanye ngaba bakwimisebenzi yokufihla ukubonwa? Iingcali kwezokhenketho kufuneka zisebenzisane nabalawuli beyunivesithi kunye neengcali zokhuselo ukuba zingaze zigqithe kumthetho, kodwa zikwanalo noluvo olulungileyo malunga nokuba ngubani na ekuhlaleni kwaye zeziphi izizathu.